အရေးကြီးလို့သေချာဖတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ - Myitter
ကျိုက်မရော ရွာတွေက ကယ်ဆယ်ရေး တကယ်လိုအပ်နေတာပါ..ဒါကြောင့် အလှူရှင်အများစုက ကျိုက်မရောကို လာနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်..နောက်နေ့တွေ ကျိုက်မရောလာကြမဲ့အလှူရှင်တွေ သတိပြုမိကြဖို့..
အရေးကြီးတဲ့ အကြံပြုချက်ကလေး (၃) ခု ပေးပါရစေ.
၁) ကျိုက်မရော- မော်လမြိုင် တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့ နတ်စန်းလမ်းမှာ ကားလမ်းတစ်လျှောက် ရေကျော်တာများတဲ့အတွက် ကားတွေ မလွတ်ပါဘူး၊ မုဒုံဘက် ခုနှစ်ခွေကနေ မောင်းကြဖို့လိုပါမယ်
၂) မုဒုံဘက်ကနေ ခုနှစ်ခွေတောင်ကို တက်တဲ့အချိန်မှာအထူးသတိထားရမှာက ၃ ဆင့်လောက်တက်ပြီးချိန်ကွေ့ နားမှာ ကားလမ်း ထက်ဝက်နီးပါး တောင်ကမ်းပါးပဲ့ကျပြီး ချောက် ဖြစ်နေပါတယ်..ညဘက်ဆို ပိုပြီးအန္တရာယ်များတာမို့ သတိထားမောင်းဖို့ လိုပါတယ်
၃) ကျိုက်မရော မြို့နယ် ရွာတွေ အားလုံးနီးပါး ရေနစ်နေကြပြီး ရေပြင်ကျယ်ပြောတာကြောင့် အလွန်နက်တဲ့ အတွက် ဖြစ်နိူင်ရင် အသက်ကယ်အင်္ကျီ ( life jacket) တွေယူဆောင်သွားပြီး သေချာ ဝတ်ထားကြပါ…အသက်ကယ်အင်္ကျီ မပါပါက ကြောက်တက်သော၊ရေမကူးတက်သော သူများကို ကားမှာပဲ ထားခဲ့ခြင်း၊လှေတစ်စီးလျှင် ဝန် နှင် အား မျှအောင် တင်ဆောင်သွားလားခြင်းများဖြင့် ကာကွယ်ပေးပါ..
( ထပ်ဆင့် Share ပေခြင်းဖြင့် လူ့အသက်များကို
ကယ်တင်ပေးကြပါ ချစ်မိတ်ဆွေတို့ ခင်ဗျာ)
Credit Zin Min Tun.
ကြိုကျမရော ရှာတှကေ ကယျဆယရြေး တကယျလိုအပနြတောပါ..ဒါကှောငြ့ အလှူရှငအြမြားစုက ကြိုကျမရောကို လာနကှတော တှရေ့ပါတယြ..နောကနြတှေ့ေ ကြိုကျမရောလာကှမဲ့အလှူရှငတြှေ သတွိပုမိကှဖို့..
အရေးကှီးတဲ့ အကှံပွုခကျြကလေး (၃) ခု ပေးပါရစေ.
၁) ကြိုကျမရော- မျလောမှိုငြ တိုကရြိုကြှသားလို့ရတဲ့ နတျစနြးလမြးမှာ ကားလမြးတစလြှောကြ ရကြေျောတာမြားတဲ့အတှကြ ကားတှေ မလှတျပါဘူး၊ မုဒုံဘကြ ခုနှစခြှကနေေ မောငြးကှဖို့လိုပါမယြ
၂) မုဒုံဘကျကနေ ခုနှစခြှတေောငျကို တကျတဲ့အခြိနျမှာအထူးသတိထားရမှာက ၃ ဆငြ့လောကျတကပြှီးခြိနကြှေ့ နားမှာ ကားလမြး ထကဝြကျနီးပါး တောငျကမြးပါးပဲ့ကပြှီး ခြောကြ ဖွစနြပေါတယြ..ညဘကျဆို ပိုပှီးအနျတရာယျမြားတာမို့ သတိထားမောငြးဖို့ လိုပါတယြ
၃) ကြိုကျမရော မှို့နယြ ရှာတှေ အားလုံးနီးပါး ရနစေနြကှပှေီး ရွပငျေကယြပြွောတာကှောငြ့ အလှနျနကျတဲ့ အတှကြ ဖွစနြိူငရြငြ အသကျကယအြကငြ်္ီ ( life jacket) တှယေူဆောငြှသားပှီး သခြော ဝတျထားကှပါ…အသကျကယအြကငြ်္ီ မပါပါက ကှောကျတကသြော၊ရမကေူးတကသြော သူမြားကို ကားမှာပဲ ထားခွဲ့ခငြး၊လှတဈေစီးလြှငြ ဝနြ နှငြ အား မြှအောငြ တငဆြောငြှသားလားခွငြးမြားဖွငြ့ ကာကှယပြေးပါ..
( ထပျဆငြ့ Share ပွခငြေးဖွငြ့ လူ့အသကျမြားကို
ကယျတငပြေးကှပါ ခဈြမိတဆြှတေို့ ခငျဗြာ)
သဲဖြူကုန်းကျေးရွာတောင်ပြိုတဲ့နေရာမှာအံ့သြဖွယ်ရာ မတိမ်းမစောင်း တည်ရှိနေခဲ့တဲ့ သမ္မတ အိပ်မက်အရတည်တဲ့ ရှေးဟောင်းစေတီတော်စေတီတော်မြတ်